Itoobiya oo soobandhigtay Qorshe ay ku hor joogsanayso Musharixiinta Beelaha Daarood una Gudbisey… | HOYGA WARARKA CAALAMKA
Wararka hoose ee naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in ay Xukuumada dalkaas u soo bandhigtay Hogaamiyaasha Koonfur Galbeed, Galmudug & HIRSHABEELE qorshe ku aadan sidii loola dagaalami lahaa musharaxiinta ka soo jeeda Beesha Daarood, sidii aysan u noqon laheyn Madaxweyne-nimada Soomaaliya.
Ilo ku dhaw dhaw wararkan ayaa sheegaya in ay Addis Ababa xooga saarayso in mar kale kooxda DAMU JADIID ay hogaamiso Soomaaliya, waxayna halis u aragtaa qorshaha socda ee ku aadan sidii looga hortagi lahaa in ay kooxdaas soo laabato.
Addis Ababa waxay u soo bandhigtay Madaxda dawlad gobaleedyadan qorshe ay ku bedelayaan codadka Mudanayaashooda baarlamaanka, laakiin qaarkood wey diideen qorshahaan.
Goobjoogayaal ku dhow dhow shirarkan ayaa sheegaya in ay ku sifeeyeen hogaamiyaasha qaarkood damaca Addis Ababa mid aan ka soconeyn gudaha Soomaaliya, ayna doorashada go’aankeeda leeyihiin Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
Xogtu waxay kaloo cadeynaysaa in ay qorshahan mudo dheer ka shaqeynaysay Addis Ababa, waxayna diidan tahay in Soomaaliya uu hogaamiyo Ra’iisulwasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake.
Ra’iisulwasaare Sharmaake wuxuu balan qaaday Xassilooni Siyaasadeed, taas oo laga hirgaliyo Soomaaliya, sidaas oo kale wuxuu balan qaaday in la mideeyo Shacabka Soomaaliyeed ee ay qabyaaladda iyo danaha Shisheeye ku dhex jiraan.